Maxaa u Sabab ah Dabadheeraashada Dagaalada Sokeeye ee Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa u Sabab ah Dabadheeraashada Dagaalada Sokeeye ee Soomaaliya?
Cabdullahi B.Ibrahim - Waa ay adag tahay in Hal Maqaal oo kaliya lagu soo koobo dhibaatada ka jirta Wadankeena balse waxa aan isku dayi doonaa inaan soo koobo asbaabta keentay in ay dabadheeraadaan Dagaalada Sokeeye ee ilaa Maanta ka holcaya Gayigeena Qaaliga ah.
Sida aan ka warqabno waa shay dabiici ah in Bani'aadamku is khilaafaan bal islaayaan mararka qaar hadaan caligu shaqeyn laakiin sidaasi oo ay tahay hadana waxa uu Ilaahay siiyay caqli iyo awood uu ku xaliyo mishaakilkiisa.
Marka aad daristo Taariikhda Dunida ma'ahan Soomaaliya wadankii ugu horeeyey ee uu ka dhaco dagaal sokeeyo ama ay dadkiisu is khilaafaan bal waaba looga horeeyey,hadaan tusaalo u soo qaadanno Qaaradda aan ku nool nahay ee Africa waxa uu dagaal sokeeyo ka dhacay wadamo badan sida Ethiopia,Liberia,Ruwanda, Brundi, Sierra Leona iyo Ivery Gost.
Dhamaan Wadamadani waxaa ka dhacay Dagaalo Sokeeyo oo ku saleysan Siyaasad iyo Xukun doon oo keenay ugu danbeyn in ay is laayaan dadkooda sida Ruwanda iyo Brundi oo kale laakiin ugu danbeyn muddo gaaban gudohood waxa ay ku guuleysteen in ay xaliyaan mashaakilkooda dibna u soo ceshtaan Nabaddii iyo Dowladnimadoodii laakiin su'aasha meesha taalaa waxaa weeye maxay u dabadheeraadeen Dagaalada Sokeeyo ee Soomaaliya?
Marka aan muddo darsaayey arintan oo aan ka fiiriyey dhinacyo badan waxaa ii soo baxday ilaa Sedex Qodob kuwaas oo soo noq noqonayey ilaa 20-kii Sanno ee la soo dhaafay ilaa maantana taagan.
In Kooxo isbiirsaday ay ku heshiiyaan in ay ridaan Dowlad ama Urrur ay markaasi is hayaan waxaan laga yaabaa in kooxahani ay kala ujeedo yihiin laakiin ay heshiis ku yihiin oo kaliya in Ninkani ama kooxdan meesha ka tuuraan.
In kooxahani aysan Heshiisba ku ahayn sidii loo qeybsan lahaa Maamulka Wadanka marka ay meesha ka saaraan Dowladda ama kooxda ay is hayaan sida dhacday marar badanba.
In aanba la Aqoon Nidaamka lagu maamulayo Dalka marka la qabto, dibna loo dhigo ka hadalka arinkaas ilaa meesha laga qabanayo.
Sedexdaan Qodob ee aan kor ku soo xusay waa Sedexda Qodob ee keenay in ay dabadheeraato dhibaatada ka jirta Wadankeena, Waxaana isku dayi doonaa inaan faahfaahiyo tusaalana u keeno si dadka Soomaaliyeed u fahmaan meesha nalaga haysto.
Marka aad ku jirto loolan Siyaasadeed oo waliba aad adeegsaneyso Xoog iyo awood ciidan si aad wax u Saxdo waxa aad u baahan tahay in aad tahay Qof diyaarsan oo hadaf leh, Haddii aad Isbahaysi ka kooban tihiina uu jiraa heshiis cad oo qeexayo sida awoodda loo qeybsanayo inta aan Howlgalka la bilaabin sidoo kalena uu cad yahay nooca Nidaam ee la qaadanayo marka meesha la qabsado laakiin xaalkeennu waa ka duwan yahay sidaasi.
Soomaalida oo markoodii horeba ahaa dad aad u fudud hadana ka kooban Qabaa'ilo uu ka dhaxeeyo loolan Siyaasadeed iskana kooban tahay aqoontooda dowladnimo ayaa Shacaarkoodu (Astaan) waxa uu ahaa horta hebel ha la rido ka dib ayaan la tashan doonaa.
Marka aad fiiriso dhowr iyo Labaatankii Sanno ee la soo dhaafay waxaa nagu soo noq noqnayey sedexdaasi Qodob bal fiiri Jabhadihii riday Maxamed Siyaad Barre, Maxay ku mideysnaayeen oo aan ahayn in Odaga meesha laga rido, Ma jirin wax ay heshiis ku ahaayeen gaar ahaan sida awoodda loo qeybsanayo iyo cidda Maxadweyne noqoneyso.
Waxaa Wadadaasi qaaday Hogaamiye Kooxeedyadii soo maray Wadanka oo waqti badan ka cunay Umadda, Waxaa sidoo kale line-kaasi ku socday Maxaakiintii Islaamiga oo hadayan Itoobiyaanka soo galin Iyagana gowda iska gelin lahaa sida Saaxiibadoodii horeba ay sameeyeen.
Bal fiiriya kuwa Maanta jira (Dowladda, Raaskanbooni, Ahlu-Sunna iyo Al-qabaliyuun) waxa ay heshiis ku yihiin oo kaliya in Shabaabka meesha laga saaro marka hore ka dibna ay Iyaga meesha kala sii qabsadaan sida ka dhacdayba Magaalada Kismaayo amaba hadda ka socoto Gobolka Shabeelooyinka, Hiiraan, Gedo iyo Baay iyo Bakool waa nafsa shay (the same thing).
Axmed Madoobe ayaa VOA-da waxa ay weydiisay inta aysan qabsan Magaalada Kismaayo ka hor in ay dhisaan Maamul ay ku midaysan yihiin Kooxda Raaskanbooni iyo Ciidamada Dowladda, Waxa uuna ku jawaabay bal aan marka hore qabsanno Magaalada ka dib ayaan maamul u dhisi doonnaa maxaa ka dhacay ka dib ? hadee waxaa dhacay wixii dhici jiray.
Ahlu-sunna iyo Ciidanka Dowladda ayaa Gobolka Gedo soo galay Iyagoo kala socda balse heshiis ku ah la dagaalanka Al-shabab ka dib maxaa dhacay? Waxaa dhacay in ay birta iska aslaan hadana ayba wali isku horfadhiyaan Balad Xaawo,Waxaa Iyagana uu khilaafi ba'ani ka jiraa Gobolada dhexe (hooyada Fitnada)
Hadaba maxaa dhici doona haddii Shabaabka laga saaro Wadanka?
Horta Ilaahay baa garanayo waxa dhici doonaa laakiin sida aan uga baranay Siyaasiyiinta Soomaalida iyo taageerayaashooda Labaatankii Sano ee la soo dhaafay ee ah horta aan ridno koox hebel marka hore Waxa ay u badan tahay in ay gowda iska suraan Shabaab ka dib sababtoo ah ma jirto wax ay ku midaysan yihiin marka laga reebo in Shabaabku cadow yahay waajibna tahay in laga saaro Wadanka.
Waxaana Tusaale u ah Khilaafaadka Siyaasadeed ee hadaba ka jira Gobolada Puntland, Gedo, Jubooyinka, Shabeelooyinka, Hiiraan iyo Baay & Bakool iyo Gobolada dhexe oo marka ugu danbeysa khilaafaadkaasi isu rogi karo Dagaalo Sokeeyo hadaanan laga hortagin Maanta oo waliba oo aan xal deg deg ah loo helin inta aan Shabaab laga saarin Gobolada ay hadda ku sugan yihiin.
Ma muuqato Runtii in wax badan laga bartay khaladaadkii hore ee la soo maray Labaatankii Sano ee la soo dhaafay waana midda igu kaliftay inaan Maqaalkan qoro ugana digo Umadda Soomaaliyeed in wali lagu socdo Wadadii hore ee ahayd horta hebel hala rido Anaga aan isu danbeyne, Waxaa Iyana walwal badan abuurayo isbaarooyinka la dhiganayo degaanada ay maamulaan taageerayaasha Dowladda Federaalka.
Gaba gabadii waxa aan u soo jeedinayaa Umadda Soomaaliyeed in ay Ilaahay u toobadkeento joojisana dhiigaan xaqdarada lagu daadinayo Maalin kasta ,Sidoo kalena ay wax ka barato dhacdooyinkii la soo maray.
Amma dhinacyada hubeysan ee isku hayo Wadanka waxa aan leeyahay ma dhicin in lagu kala adkaado dagaal sokeeyo woodaada heer kastaaba ha gaarsiisnaato mana dhici doonto in qof Soomaali ah inta laga adkaado uu ka baxo Wadanka.
Wadada keliya ee idin furan ee aad xal ku gaari kartaan waa Wadahadal iyo dib-uheshiisiin Daacad ah amma haddii la waayo waxa aad ku jireysaan waa sidan Dil, Gaajo, Rafaad, Qaxootinimo, Dawarsi, Burcadbadeednimo iyo marka ugu danbeyso oo dalka la idinka qaato.